Tag: gaalkacyo | Sagal Radio Services
Madaafiic culus oo ku hoobanaya xaafadaha magaalada Gaalkacyo iyo dagaal wali socda
Sagal Radio Services • News Report • December 3, 2015
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in madaafiic culus ay ku hoobanayaan xaafado ka tirsan magaalada Gaalkacyo, iyadoo iska hor imaadka uu socdo muddo ku dhow saddex saacadood.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo lagu dilay Galkacyo
Sagal Radio Services • News Report • May 9, 2015
Kooxo hubeysan ayaa xalay waxay magaalada Galkacyo, gaar ahaan dhankeeda Waqooyi ku dileen Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo lagu magacaabi jiray Saciid Xuseen Nuur.
Macallin Keenyaan ah oo xalay lagu dilay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • May 8, 2014
Labo ruux oo la sheegay inay dhallinyaro ahaayeen ayaa xalay ku dilay Waqooyiga magaalada Gaalkacyo macallin Keenyaan ah oo wax ka dhigayay machadka ku yaalla aalkacyo oo lugu magacaabo Vision International Collage, waxaana u xaqiijiyay warbaahinta dilka macallinkan mas'uuliyiinta machadka.
Saraakiil ka Tirsran Qaramada Midoobay oo Maanta lagu Toogtay Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • April 7, 2014
Garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa maanta oo lagu toogtay laba sarkaal oo u shaqeynayay hay’adda UNODC oo la dagaalanta daroogada iyo damiyada.
Booliska Galmudug oo qabtay nin looga shakiyay Al-Shabaabnimo
Sagal Radio Services • News Report • March 31, 2014
Booliska maamulka Galmudug ee magaalada Gaalkacyo ayaa howlgal lagu adkaynayey amniga ku soo qabtay nin lagu tuhmayo inuu ka tirsan yahay maleeshiyada Al-Shabaab.
Qarax Dhimasho iyo Dhaawac Sababay Oo Ka Dhacay Waqooyiga Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • January 21, 2014
Ugu yaraan 4 qof ayaa geeriyootay 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen kaddib labo qarax oo ka dhacay xaafadaha Waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ee dhanka Puntland.
Nicholas Kay oo Magaalada Gaalkacyo kula kulmay Isimmo iyo qaar ka mid ah Musharraxiinta Doorashada Puntland
Wakiilka Qaramada Midoobay ee dalka Soomaaliya, danjire Nicholas Kay ayaa kala kulmay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug madaxda dhaqanka iyo musharaxiinta u taagan hoggaanka Puntland ee ku sugan Gaalkacyo.
Sawirro)Prof. C/wali Gaas oo si diiran loogu soo dhoweeyay magaalada Galkacyo
Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Prof. C/wali Maxamed Cali (Gaas) ayaa gaaray magaalada Galkacyo ee Gobolka Mudug, halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyay.
Mid kamid ah saraakiisha Burcad badeeda oo meydkiisa lagu arkay koofurka Gaal-kacyo.
Wararka laga helaayo magaalada Gaal-kacyo ee xarunta gobalka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in meydka mid kamid ahaa burcad badeeda Soomaaliyeed oo dhalasho ahaan kasoo jeeda Waqooyiga Gaal-kacyo laga helay Koofurta magaaladaasi, iyada oo aan la’ogaan ilaa hada cidda halkaasi soo dhigtay.